Maxaa keenay in hadda Guddi uu magacaabo Madaxweyne Farmaajo,? Maxaadan ogeyn oo ku gadaaman kiiskaan? | Warbaahinta Ayaamaha
Maxaa keenay in hadda Guddi uu magacaabo Madaxweyne Farmaajo,? Maxaadan ogeyn oo ku gadaaman kiiskaan?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay guddi uu sheegay inuu soo baari kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Guddi baaritaan ku sameeya Kiiska Ikraan Tahliil ee u magacaabay madaxweyne Farmaajo ayaa kala ah Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo magacaabayaan Taliyeyaasha Ciidamada sida Booliska, Xoogga dalka iyo Nabadsugida.
Tallaabadan ayaa loo arki karaa in Madaxweynaha uu labo ujeeddo ka leeyahay.
Mida koowaad ayaa ah inuu Kiiska kala wareego Ra’iisul Wasaaraha
Inuu isaga meyro eedda maalmahan loo jeedinayay ee ahaa inuu hortaagan yahay cadaaladda Kiiska Ikraan.
Magacaabidan ayaa ku soo aaday, iyadoo Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada ay qabatay gal dacwadeed ka dhan ah madaxda Hey’adda NISA, iyadoo Madaxweynuhu uu Guddiga uu magacaabay ku soo daray mid ka mid ah Hey’addii dacwada laga gudbiyay ee NISA.
Sidookale wareegtada Madaxweyne Farmaajo waxaa ku qoran in guddiga baaraya Kiiska Ikraan uu xubin ka mid ah soo magacaabayo Taliyaha NISA
Waxyaabaha muranka badan dhaliyey ayaa wa a kamid ah:- Taliyahee ayaa soo magacaabaya Ma Kusimaha uu magacaabay Farmaajo mise Agaasimaha KMG uu magacaabay Ra’iisul Wasaarahe ee Bashiir Goobe waa kee Taliyaha?
Maadaama arrinta Maxkamad loo gudbiyay oo Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada ay qabatay dacwada ay qoyska Ikraan soo gudbiyeen, kuna filan tahay inay baarto.